धरानमा व्यापार-व्यवसायः सोंचेझै रैन’छ !::Hamro Koshi Awaj / awaz
कोरोना कहरपछिको व्यापार
धरानमा व्यापार-व्यवसायः सोंचेझै रैन’छ !
चाडबाड भित्रिएकाले झिनो आशाः व्यवसायी (२६ तस्वीर)
२०७७ असोज १४
धरानः धरानमा लकडाउन छैन । बजारमा मानिसहरूको चहलपहल बढेको छ तर पनि व्यवसाय छैन । धरानमा पसल, रेष्टुराँ, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कार्यालयहरू खुलेका छन् । कोरोना भाइरसका संक्रमित पनि दिनानुदिन थपिँदै गएका छन् । निको भएर घर फर्किने संक्रमणमुक्तहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । बजारमा चहलपहल देख्दा व्यापार–व्यवसाय लयमा फर्किसकेको जस्तो देखिन्छ ।
लकडाउन खुलेपछि व्यापार व्यवसायले गति लिने सोचेका व्यवसायीले व्यापार नभएको गुनासो गर्न थालेका छन । व्यवसायीले भन्न थालेका छन्– लकडाउन खुलेपछि व्यवसायले फड्को मार्ला तर धरानमा व्यवसाय सोचेझैं रैन’छ ।
धरान–१ एक्टिभ फेसन वेयरका सञ्चालक यज्ञ श्रेष्ठले लकडाउनपछि धरानमा व्यापार–व्यवसाय सोचेंझैं नभएको बताए । आमनागरिकको आयस्रोत घटेको र कोरोनाको त्रास बाँकी नै रहेकाले अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु बेच्ने पसलबाहेकमा व्यापार हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले अहिलेसम्म एक दुईजनाबाहेक अन्य ग्राहक नआएको बताए । उनले थपे, ‘अत्यावश्यक क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र व्यापार हुन सकेको छैन ।’
पसलमा सामान्य व्यापार भइरहेको भएपनि पहिलेको तुलनामा निकै कम व्यापार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । धरान कपडा व्यवसायी सङ्घका जीवन अग्रवालले बजारमा स्थानीय नागरिकको चहलपहल भएपनि बजारमा किनबेचको माहोल अझै बन्नै नसकेको बताए । ‘अघिल्लो वर्षको दशैंको स्मरण गर्ने हो भने पनि यतिबेलासम्म चहलपहल बढिसक्थ्यो, पसलमा भीडभाड भइसक्थ्यो’, उनले भने, ‘तर महामारी कायमै रहेकोले खासै माहौल छैन ।’
कपडा, जुत्ताचप्पल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर, पुस्तक तथा स्टेशनरी लगायतका पसल तथा वर्कसपलगायतका व्यवसायको व्यापार अझै हुन सकेको छैन । धरानमा होटलहरु खुलेका छन् । तर दैनिक चिया, खाजा खुवाउने बाहेकका होटलहरुमा व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीले बताए ।
व्यापार नभएपछि ऋण तिर्ने समस्या
धरानमा बजार खुल्न थालेपछि अब व्यापार हुन थालेको भन्दै बैंकले ताकेता थालेको व्यवसायीले गुनासो गरे । अहिले व्यापार नहुँदा व्यवसायीहरू बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा चिन्तित छन् ।
‘व्यापार नभएपछि बैंकको ऋण कसरी तिर्ने समस्या बढेर गएको छ,’ व्यवसायी सर्मिष्टा श्रेष्ठले भनिन् । अवस्था सहज नहुँदासम्म व्यापार नहुने भएकाले व्यवसायीलाई बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । केटु फेसनका सञ्चालक कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘दशैं आइसकेपनि व्यापार हुन सकेको सकेको छैन, कसरी बैंकको ऋण तिर्ने भन्ने समस्या धरानका अधिकांश व्यवसायीमा छ ।’
चाडबाडको झिनो आशा
धरानको व्यापारिक केन्द्र नयाँ बजार, पुरानो बजार साथै सब्जीमण्डी, पुतलीलाइन, जुत्ता–चप्पलको लागि भीडै लागिरहने देशीलाइन व्यावसायी उपभोक्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अहिले त्यहाँका व्यापारी बिहान पसल खोलेपछि हाई काडेर बस्न बाध्य छन् ।
‘झुक्किएर फाट्टफुट्ट आइहाले भने हो, नत्र व्यापार सुनसान नै छ’, व्यवसायी सर्मिष्टा भन्छिन्, ‘व्यापारको मन्दीले चाडबाड नै खल्लो होला जस्तो छ ।’ कोरोनाको त्रास कायमै रहेकाले पनि मानिस बाहिर निस्किन डराइरहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘काम विशेषले हिँडेको देख्दा पसलमै आइहाल्छन् कि जस्तो लाग्छ, तर कोही छिर्दैन, अर्थात् व्यापारकै लागि आउनेको उपस्थिति न्यून छ, कोरोनाकै डरले पनि धेरै मानिस बाहिर निस्किन सकेका छैनन् ।’
ग्राहक नआएपछि मोबाइल खेलाउँदै बसेको व्यवसायी राजकुमार महतो बताउँछन् । ‘मान्छेको सामान्य हिँडडुल छ तर किनमेलका लागि भनेर आउँदैनन’, उनले भने । दशैं आउन अब धेरै हप्ता बाँकी छैन । यो समयमा दशैंको जोहो गर्न विभिन्न जिल्लाबाट मानिस धरान आइपुग्थे तर यसपटक छैन । ‘दशैं नजिकै आउँदैछ, अब दशैं लागेपछि व्यापार बढ्छ कि भन्ने झिनो आशा संगालिरहेका छौं ।’ व्यवसायी यज्ञ श्रेष्ठले भने । तस्वीरः हाम्रो कोशी आवाज